In aad doorato SFI iskuul fiican ayaa fure u noqon karta horumarkaaga | Somaliska
In aad doorato SFI iskuul fiican ayaa fure u noqon karta horumarkaaga
In mudo ah ardada doonaysa in ay dhigato SFI waxay xaq u leeyihiin in ay doortaan iskuulka ay dhiganayaan. Taasoo ardada siinaysa fursada in ay doortaan iskuulka ay ka heli karaan waxbarashada ugu fiican.
Wiilka lagu magacaabo Milan Filipovic waxa uu xili dhow bilaabay barashada koorsada SFI, intii uusan dooran iskuulka waxa uu sameeyay baaritaan iyo isbarbar dhig iskuulada, isagoo ugu dambeyntii doortay iskuulka Lernia.
Isaga oo ka hadlaya sababta uu u doortay iskuulka Lernia ayuu yiri Milan Filipovic “Lernia waxaan ka dhignaa Swedish. Labo bilood ka dib markaan bilaabay SFI luuqada waan ku hadli karaa oo waan fahmi karaa. Hada waxaan helay shaqadii iigu horeysay Sweden, anigoo shaqeeya dhowr maalmood iskuulkana dhigta”.
Maadaama barashada luuqada Swedishka ay tahay wadada lagu galo suuqa shaqada Sweden, ayaa iskuulka Lernia waxa uu xooga saaraya in ardada uu la garab istaago caawimaad joogto ah. Shaqada iskuulka ayaa ah in ardada laga caawiyo sidii ay u abuuran lahaayeen mustaqbal shaqo iyo waxbarasho. Si loo gaaro ujeedkaas ayaa iskuulku waxa uu ardada ku caawiyaa in ay helaan shirkad ay tababar ka sameeyaan inta ay waxbarashada ku jiraan iyo quburo talo bixin siisa.
Si dhamaan ardada ay u helaan macluumad sax ah ayaa iskuulka Lernia waxa uu macluumaadka ku turjumay 11 luuqadood oo Af-soomaali ku jiro. Macluumaadkaas ayaa laga heli karaa bogga iskuulka Lernia. Iskuulka ayaa xitaa waxaa ka shaqeeya shaqaale ku hadla luuqado kala duwan kuwaasoo faahfaahin kaa siinaya waxbarashada iskuulka.
Si ardadu ay u helaan dareen ku saabsan waxbarashada iskuulka Lernia ayay booqan karaan xarumaha iskuulka ee Stockholm, maalmaha talaadada saacadaha u dhaxeeya 13-15:00. Booqashada ayaa fursad kuu siinaysa in aad la kulanto ardada hada dhigata iskuulka iyo macalimiinta.
FIIRO GAAR AH: Mowduucaan waa war saxaafadeed ka soo baxay iskuulka Lernia.
Shaqo la’aanta oo kor u kacday.
waxaan orankara Lernia waa shirkad waxbadan uqabatay dadka cusub waliba markaan iska hadlo aniga waxay ii fududaysay inaan xirfad barto waxayna iga caawintay inaan suuqashaqada galo iyadoo i fududaysay Praktik waliba xirfadii an bartay ah waxana k amid haay dadka ku cusub wadanka waxana hubaa in ay iga cawintay Lernia waxbadan oo fahanka shaada iyo xiriirka shirkadaha Tack Lernia och Somaliska
Asc marka ugu horaysa waad ku mahad santahiin macluumaadka aad noogu soo baahisaan bartan somaliska oo aan si joogta ah u soo booqdo maalinwalba .Markaa waxaan rabay in aan si toosa u waydiiyo qoraha qormadan ciiwaanka iskuulka aad amaanteen iyo sida loola xidhiidhi karo barta internat kiisa .Mahadsanidin .
asc waan idin salaamay asxaabta dhamaantiin salan kadib walaalayaal waxaad iga jaahil bixisaan schoolka lernia xirfadaha lagabarto maxaa kamid ah,ma dadka cusub kaliyaa dhigta,mis ekuwii hore iyo kuwa danbaba weey dhigan karaan.intaas iiga soojawaaba fadlan
Haa walaa kuleey hadaad tahsy xataa dadka kuraagay wadankaan waaad kageleeysaa koorso aanan aheen sfi
Aniga wan kugu racsanaahy inu qofku dorto halka u is leyahay halkan Ayad ka guul gari karta Aniga wadanka waxan joga 2 sano bishi hore ayan Arbeka ka baxay SFI waxan dhameyey sanadki igugu horeyey e skolka, bishan waxan dhameyn raba Grunskola waana shaqeya alx, fikirkeyga skolka wax badan maka sacidi Karo wa in ad adiga dadaal mujisa hadi ad dorato skolka ugu wanagsan Sverige lkn adiga aadan dadaleynin wax badan maku anfeceyso, qabka uu qofka u dadaali Karo weybadan tahay isku day in aad saxibo swedish ah sameysto adigo u adegsanaya dhanka wanagsan iyo saxib dhow la noqo macalinka läxaha lagu diro celi iyo ka dherow lokalada Somalida asxabta Somaliada ah waqti badan haku bixinin, isku day in ad aqrido wax un muhiim mahan in ad 100% fahamto hal eray od ka hesho aya kugu filan.
Subxanallah ! leania anigu waxan dhigtay 4 bilood malin walba laba macalin aya jogaysay , wadanka waa ku cusbaa , dhamaan ardayda kafee iyo dhato aya lagu jiray , wax aan kaa bartay maa jirto
May 31, 2014 at 23:04
Lernia waa shirkad ama hey’ad ay leedahay dowlada Sweden. wax yaabo badan ayaana laga barta sida luqada iyo xirfadaha,Lernia waxay ku fiicantahay in ay iyada ku bareyso waxaad rabto isla markaana ay ku geyneyso meel aad ku qaadato Praktik(ku tababarasho waxaad soo baratay).